Faqooq ka aloosan kireeynta shirkadda guryaha ee Airbnb - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Faqooq ka aloosan kireeynta shirkadda guryaha ee Airbnb
La cusbooneeyay måndag 3 oktober 2016 kl 12.51
La daabacay måndag 3 oktober 2016 kl 10.50
Faqooq ka aloosan kireeysashada guryaha
DJ-ga Tin Davis oo ku dhaqan magaalada New York oo 15 jeer guri loo diidey midabkiisa dartii inuu Stockholm ka kireeysto. sawir: Sawirle: Maria Ridderstedt/Sveriges Radio
Shirkadda mulkida loo leyahay ee kireeynta muddooyinka gaaban ee guryaha Airbnb ayaa lagu soo warramayaa inay faqooqnaan ka jirto kala soo guduboonaata dadyoowga madow, sida ku cad baaritaan ay middaa ku sameeysay laanta wararkaEkot oo wada-shaqeeyn la sameeysay barnaamijka idaacadda ee Kaliber.
Tim Davis oo ku dhaqan magaalada New York oo isku dayay inuu guri kireeysto isaga oo u maraya shirkadda adeegga guryaha ee vi tjänsten magaalada Stockholm kuleeylihii ina dhaafay 15 jeer diidmo loogala hor-yimid. Wuxuuna aamin-san yahay inay ugu wacan tahay midabkiisa madowga ah.
– Waxaan codsi u diray 15 guri oo aan dhammaan kala kulmay MAYA. Hase yeeshee aan dabadeed arkay in wakhtiyadii la ii sheegay inaaney suurtagal ahayn ey ku sii qornaayeen bogga, sida uu sheegay Tim Davis.
Dabdeed kolkii uu 15 codsi u gudbiyay siduu hooy ku kireey-san lahaa isaga oo u maraya shirkadda adeegga guryahay ee lagu magacaabo Airbnb ee magaalada Stockholm ayuu ku waayay, halka uu sidoo kale macmiil ka yahay isla-shirkadda ee magaalada New York, sababna uu middaa uga dhigay midabkiisa.
– Weligay Sweden horay uma aanan iman, markaa waxaan isku dayay inaan baaris ku sameeyo. Ma suurtagal baa in carrigaa la tago? Dhibaato miyaa igala soo gudboonaan karta? Inaan madow ahay ma dhibaato ayaa igala soo gudboonaan karta?
Dalka Mareeykanka ayuu warkani noqday mid aad loo hadal hayay sannadka, intaasina dheer tahay iyada oo baaris cilmiyeey-san oo jaamicadda Harvard ay sameeysay ay ku muuqatay inay dadyoowga midabka cad uga sahlan tahay inay hooy ku kireeystaan shirkadda adeegga ee Airbnb haddii uu magacaagu u dhawaaqayo sida magacyada caddaanka ee dalka Mareeykanka, haddii loo barbar-dhigo inuu magacu u dhawaaqo magacyada lagu yaqaanno madowga mareeykanka (afroamerikan).
Waxaannu sku dayney in dhibaatada noocaasi ah ee ka aloosan dalka Mareeykanka ay sidoo kale ka jirto Sweden, annagoona ku tallaabsanney in baaritaan yar oo aannu ku tijaabiney in aannu guryo ku kireeysanno annaga oo shirkadda Airbnb u mareeyna magacyadooda diiwaanka oo aannu ka qaadanney madow iyo caddaan.
Annaga oo adeegnasneeyna diiwaanka dadyoowga madow ee shirkadda ayaannu su’aalo u dirney 200 oo ka mid ah dadyoowga guryaha kireeya ee shirkadda Airbnb ee magaalooyinka Stockholm, Göteborg iyo Malmö iyo in guryahooda la kireey-san karo muddo cayiman.
In bar ka badan dadyoowgii aannu la xiriirney ayaa HAA ku jawaabay. Hase yeeshee intii MAYA tiri kolkii aannu caddaan u bedelney ayey saddex daloolow mid kuwii horay u diidey sheegeen in hooygoodu suurtagal yahay in la kireeysto muddadaa cayinayd.
Sidan ayay ku jawaabeen qaar ka mid ah kolkii uu qof madow weydiiyay:
" – Nasiib darro maya, asxaab ayaa booqasho iigu iman doonta.
– Nasiib-darro xilligaa guriga ma joogno.
– Nasiib-darro gurigii ma bannaana muddadaa, inaan wakhtiga bedelo ayaan ilaawey."
Hase yeeshee sidan ku jawaabeen qof cad kolkuu isla su’aalihii weeydiiyay:
"– Aad iyo aad ugu soo dhowaada!
– Waa hagaag, xilligee ayaad jimcada ku soo beegan tihiin?
– Aad iyo aad. Ku soo dhowaada!"
Martin Mörk, ahna madaxa waaxda howllaha ee xafiiska ka hor-tagga faqooqa ayaa sidan uga fal-celiyay kolkii war-bixintani gaartay.
– Way adag tahay in faallo laga bixiyo shakhsiyaadka gaar ahaan, hase yeshee kolka guud ahaan laga eego ayay u muuqaneeysaa inay dhibaato ka jirto.
Caadiyan nolosha shakhsiga u gaarka ah uu xeerku ka dhowrayaa xeerka faqooqa, hase yeeshee kolka xayeeysiin loogu sameeyo ganacsi si furan shaashad internet-ka ah, waxey dadyoowgaasi meel kaga dhacayaan xaararka faqooqa.
– Sida uu xeerka faqooqu u qoran yahay waxay masuuliyad ka saaran tahay fal-dembiyeedyadaa mulkiilaha hooyga.
Maxaad ka oran lahayd haddii aad maqasho huteel sidaa oo kale dadka u faqooqa?
– Xaqiiqdii, waannu u kuur-geli laheyn huteelkaa, sida uu sheegay Martin Mörk.
Shirkadda Airbnb ayaa ka gaabsatay inay wareeysi kala yeelato arrintaa laanta wararka ee Ekot iyo laanta Kaliber, hase yeeshee sheegtay faqooqa noocan ahi uu yahay mid aan loo dul-qaadan karin, isla-markaana ay shirkaddu tallaabooyin ka qaadi doontaa haddii ey macaamiishu kala soo xiriiraan faqooq lagu sameeyay.
Isha/ Ekot, Kaliber.